Johane Chitsauko 06. Jesu ndiye ega Tsime reHupenyu Husingagumi
ChurchAges.net Nyeredzi nomwe ndivo vatumwa vekereke nomwe - Zvakazarurwa 1:20
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Johane Chitsauko 06. Jesu ndiye ega Tsime reHupenyu Husingagumi
Johane Chitsauko 06. Jesu ndiye ega Tsime reHupenyu Husingagumi
JOHANE 6:1 Shure kwaizvozvo Jesu wakaenda mhiri kwegungwa reGarirea, ndiro (gungwa) reTiberiasi.
Garirea yaive nzvimbo yakasarudzika kunaJesu. Inzvimbo iri kurutivi rwekuboshwe (kana mumahombekombe ekumadokero) egungwa reGarirea.
Zvishamiso makumi maviri nezvishanu zvezvishamiso zvake makumi matatu nezvitatu zvakaitikira muGarirea uye mifananidzo yake gumi nemipfumbamwe yemifananidzo yaakadzidzisa nayo makumi matatu nemiviri yakataurwa ikoko. Garirea yaive nzvimbo yaive mumahombekombe ekumadokero eGungwa reGarirea.
Asi mahombekombe ekumadokero aive negungwa raifambidzana nezita rakaipa. Guta reTiberiasi raive rakavakirwa pakanaka asi paivewo panzvimbo paimbova nemakuva ekare saka yaive ichiyanana nerufu. Guta raive ravakwa naHerode Antipasi, akauraya Johane Mubapatidzi. Herode Antipasi aive mwanakomana wamambo Herode aive akaipa kwazvo akamboedza kuuraya Jesu achiri Mwana. Rakapihwa zita remubati weRoma wechipiri Tiberio aive mubati panguva ykauraiwa Jesu. Tiberio akatonga kubva muna 14-37 AD. Aive munhu ane hutsinye akaipa kwazvo aiisa kuda kwake pavanhu kupfurikidza kuuraya, uye kutora zvinhu zvevanhu nechisimba kuti atengese aite mari. Jesu akarovererwa panguva yekubata kwaTiberio. Ndicho chikonzero nei Pirato nehumbwende akatendera chinyararire kuti Jesu aurawe maJuda paakataura kuti vaizomurevera kuna Kesari. Tiberio ndiye aive Kesari kana mubati mukuru panguva iyoyo. Simba zhinji raive ran’oresa Tiberio aipa mutongo werufu kaviri kana kaatatu pazuva rega rega. Mitumbi yevanhu vaaiuraya yaizvuzvurudzwa kuenda kurwizi rweTiberi yokandwa murwizi. Parato aitoziva kuti akasaitawo hutsinye saizvozvo pake paimuperera. Tiberio, aida kwazvo kuona vanhu vachitambudzika asina tsitsi, aizouraya Pirato dai Pirato asina kuuraya Jesu. Ipapo Pirato akamutumirazve ikoko kwakanoita mutongo mukuru wekumhura Jesu muna 33 AD. Herode Antipasi akarambawo kuregerera Jesu, saPirato, aityira kwazvo hupenyu hwake akatumira Jesu kuna Pirato achiziva hake kuti aitotongera Jesu rufu nekuti Pirato aive asina moyo, saiye Herode Antipasi, aitotyawo Tiberio zvekufa chaiko. Hazvina kubatsira zvachose nekuti chero iye Herode akafa achiri mudiki muna 39 AD, makore maviri mumashure mekuuraiwa kwaTiberio muna 37 AD. Pirato akazvinyudza mumvura muna 38 AD. Saka tiriniti iyi yakabatanidzwa parufu.
Tiberio zvinoreva kuti “weTiberi” rwizi runoyerera muRoma. Mitumbi yevakafa ndiro raive goho rerwizi “Tiberi” mumazuva ake sezvo akashandura rwizi Tiberi kuruita rwizi rwerufu runoyerera ruchienda kugungwa. Gungwa rinomiririra vanhu navazhinji vasina kugadzikika vanokurudzirwa nezvinhu zvese-zvese zvinotsvaurwa nemafungu evatungamiri vavo asina kugadzikika nepfungwa dzavo. Kuuraya kusingaperi kwakaita kuti vanhu vatye uye vagare vachizvininipisa.
Jesu kana zvichienzaniswa, ndiye Rwizi rwemweya weHupenyu. Muhushe hwake hwekupedzisira kunenge kusisina gungwa.
Garirea zvinoreva kuti “denderedzwa” kana “gwara rinoperera parakatangira”.
Jerusarema Idzva, kana jecha renguva rapera uye vatsvene vose vapedza basa ravo, vachaguma vamuIsraeri umo Mwari vakapa Abrahama chivimboso makore 4 000 akadarika.
Saka naJesu tine denderedzwa rine nzira. Dzokerai kumavambo kwazvakatangira.
Kwatiri zvinoreva kutambudzikira kudzokera pakutenda kwakambopiwa vatsvene munguva yekereke yekutanga.
JUDASI 1:3 Vadikani ndakati ndichishingaira zvikuru kukunyorerai pamusoro pokuponeswa kwedu tose, ndakavona kuti ndinofanira kukunyorerai, ndichikurairai kuti murwire kwazvo kutenda kwakadeya kupiwa vatsvene kamwe.
Pakupedzisira “denderedzwa” remakore 2000 enhorondo yenguva nomwe dzemakereke richapfigwa kana vatendi venguva yekereke yekupedzisira vatenda zvakafanana nezvakatendwa nekereke yekutanga. Mbeu pamuti inokohwewa chete kana mbeu yechibereko yafanana nembeu yakadyarwa.
Jesu anopesana zvakazara nevabati veRoma nekuita kwavo. Jesu anopa hutsvene nehupenyu, Tiberio aive munhu werufu. Kuita kwake, kwaisundwa nekuzvida, kwaive kwembwende dzaipomera munhu asina mhaka kuti vaponese hupenyu hwavo hwaive husina tariro.
Saka Jesu ari mumahombekombe mekumadokero kweGungwa reGarirea raive kurutivi kwaive neguta reTiberiasi, akayambukira kune rumwe rutivi.
Aida kuratidza kuti aive achipikisa mubati weRoma.
JOHANE 6:2 Vanhu vazhinji zhinji vakamutevera, nokuti vakavona zviratidzo zvaakaita kuvarwere.
Zvishamiso zvaJesu zvakakwezva vanhu vazhinji. Hutano chinhu chikuru kuzviwanira. Saka chero panopihwa zvipo neEvangeri, vanhu vanotevera nekukasika. Evangeri rekupfuma richaramba riri nembiri. Asi hazvifadzi Mwari nekuti zvese zvinokonzereswa nemweya unoshamisa ndezvenguva duku. MaJuda muEksodo havana kuona zvishamiso zvizhinji here? Asi vakaramba Mwari pavakangowana mukana.
Kuzviwanira zvinhu zvenyama hachisi chikonzero chakanaka chekutevera Mwari.
JOHANE 6:3 Jesu akakwira mugomo, akagaramo navadzidzi vake.
Ibasa rakaoma kukwira gomo. Ibasa rakaoma kutevera Jesu. Jesu aisarudza kuva ari ega nevadzidzi vashoma kwazvo vakaramba zvese kuti vamutevere. Aive asingafadzwi nevanhu vakawandisa vaifadzwa nezvishamiso zvaaiita. Kutenda kwavo kwaive kushoma kwazvo. Paingouya kuomerwa, vaibva vabva kuna Mwari. Kunzwisisa Magwaro kwakakosha kudarika kuona zvishamiso zvemweya. Johane Mubapatidzi, muprofita mukuru kwazvo, haana zvishamiso zvaakaita.
Kupihwa kudya kwevanhu zviuru zvishanu ndicho chega chishamiso chakanyorwa mumaBhuku ese ari mana eEvangeri.
Asi hatizivi kuti zvakaitikira panzvimbo ipi chaiyo, vanodzidza Bhaibheri vachiri kukakavadzana pamusoro pechinhu ichi.
Saka Jesu haatsvagi kushambadza zvishamiso zvake. Asi anoda kuti tidzidze chokwadi chakadzama kubva kwazviri.
JOHANE 6:4 Paseka mutambo wavaJuda, wakanga uri pedo.
Mutambo waiuya. Izvi zvinoratidza kuti Jesu aitarisa zvinhu zviri munguva inouya zvakadii.
Evangeri raJohane rinoratidza Jesu ari Gondo rinobhururuka. Mweya waMwari ane muono unopinza unoona zviitiko zviri mberi muhupenyu hwedu.
Maive muna Kubvumbi, nguva yekukohwewa kwebari. Bari inoshandiswa kubika chingwa mucherechedzo wedzidziso dzeMagwaro.
Mutambo wePaseka unomiririra kufa kwaJesu seGwaiana rechibairo chePaseka. Ndipo paizotanga nguva nomwe dzemakereke nekuti maJuda vakamuramba pavakakumbira rufu rwake.
Saka Jesu, zvaaive asisiri pedyo neTiberio sezvo aive ave kune rumwe rutivi rweGungwa reGarirea, aida mutambo unomiririra nguva nomwe dzemakereke apo kereke yechokwadi yaizobuditswa kubva mukurudziro dzeRoma yotsaurwa kubva mukereke yeRoman Catholic yaizouya.
JOHANE 6:5 Zvino wakati achitarira (Jesu), akavona vanhu vazhinji zhinji vachivuya kwaari, akati kuna Firipo: Tingatengepiko zvingwa, kuti vanhu ava vadye?
JOHANE 6:6 Wakareva izvozvo achimuidza, nokuti iye wakaziva amene zvaakanga achida kuita.
Firipi aizodzidza chidzidzo. Mwari anogaroshandisa vanozvidzwa vanorambwa nevanonzi havana kufanira kuzadzisa zvinangwa zvake kunyika.
JOHANE 6:7 Firipo akamupindura achiti: Zvingwa zvamadenari anamazana maviri* hazvingavaringani, kuti mumwe nomumwe atore zvishoma.
Firipi aifungira pakuru. Mumufananidzo uyu wemunda wemizambiringa Jesu aive ataura kuti denari ndiwo waive muripo wairipirwa kana munhu akashanda musi mumwechete. Saka madenari mazana maviri waive muripo wemunhu waimuripira kudarika hafu yegore.
Saka Firipi aive akurirwa. Aive asitorina mhinduro chero pakuwanisa munhu mumwechete chekudya.
Vaida chingwa chekudya kuti vagutse nyama dzavo.
Firipi aifanira kufunga nenzira yemweya. Yaive nguva yekukohwa vanhu vazhinji vaizomiririra vatendi munguva nomwe dzekereke.
Vatsvene vose kubva munguva nomwe dzekereke ndivo vachava goho guru rakatarisirwa naMwari. Ruzhinji rwevanhu urwu rwunozomiririra makore 2000 enhorondo yekereke.
Saka mubvunzo waive wekuti, kereke yaizowana kupi chekudya chayo mukati memakore 000 enhorondo yayo panyika? Shoko raMwari ndiro Chingwa cheHupenyu ndiro rega rinogona kuita tsime reHupenyu husingaperi kune avo vanogona kutenda kuMagwaro.
JOHANE 6:63 Mweya ndiye unoraramisa, nyama hainamaturo; mashoko andakataura kwamuri, ndiwo mweya novupenyu
Kushingaira kwevadzidzi panyama kwaive kusingabatsiri. Havana kuwana chingwa chakakwana.
Asi Evangeri raizotangira paduku.
Munhu Mumwe, Jesu, ndiye aive Shoko rechokwadi. Aizokurudzira boka duku remapostora kuti rinyore Testamente Itsva. Ndiro raive Chingwa cheHupenyu. MaKristu ese, munguva chero ipi zvayo yavaive, vaizowana hupenyu husingagumi kupfurikidza kutenda uye kutevera kwavaiita Magwaro akanyorwa nemapostora.
Chingwa cheHupenyu chaizobva kuna Jesu choenda kuvadzidzi chozoenda kuvanhu.
ZECHARIA 4:10 "Nokuti ndiani akashoora zuva rezvinhu zviduku?
Zviduku. Munhu mumwechete asina chaakabvira anyora akangodzidzisa vadzidzi gumi nevaviri chete, mumwechete wavo aive akaipa. Aive netariro yekushandura nyika nekuita kuti karenda ritange nekuzvarwa kwake? zvairatidzika sezvisingagoneke.
Andreasi aitomboda kuedza. Akawana mwana mukomana aive auya nembuva yake. Chaive chimwe chinhu, asi kunyange Andreasi aiziva kuti zvaive zvisina kukwana.
Zvisinei, kuedza kuduku kunogona kubereka zvinhu zvikuru kana tikasiira zvese mumaoko maJesu.
JOHANE 6:8 Zvino mumwe wavadzidzi vake, Andreasi, munun’una waSimoni Petro, akati kwaari:
JOHANE 6:9 Pano panomukomana, unezvingwa zvishanu zvebhari nehove mbiri; asi izvi zvingakwanira sei vanhu vazhinji vakadai?
Andreasi akaona chikafu chishoma kwazvo.
Jesu akaona zvidimbu zvinomwe zvechingwa nenyama zvaive mucherechedzo wedzidziso yaizodiwa nenguva nomwe dzekereke kubva kuShoko raMwari. Zvingwa zvishanu zvebari zvaimiririra nguva mbiri dzekutanga nenguva nhatu dzekupedzisira dzekereke. Nguva yekereke yekutanga yaive nechokwadi kubva kumapostora, nguva yechipiri yaive ichiri nechokwadi asi yaive yatotanga kurasika kupfurikidza kuisa munhu aitungamirira kuti ave musoro wekereke imwe neimwe. Vakabva vaisa bhishopu kumuita musoro wemakereke ese aive muguta rimwe nerimwe.
Nguva yekereke yechitatu yakaona mubati weRoma Constantine muna 325 AD achigadza bhishopu weRoma sabhishopu mukuru pamusoro pemabhishopu ose aive muguta. Negore 400 AD bhishopu weRoma aive akudaidzwa kuti Pope. Hupikisi hwekereke yeRoma hwese hwakaparadzwa nechisimba nemubati weRoma nguva iyoyo maKristu ese vaive vachifanira kuvanda kuti vararame. Izvi zvaimiririrwa nemucherechedzo wehove inotuhwina isina anoona pasi pemvura. Chokwadi chakarambwa munguva iyi vanhu vachida tsika dzaive dzisimo muMagwaro uye mifungo yevanhu. Zvematongerwo enyika uye tsika dzemapegani zvakapinda mukereke. Hakuna chingwa chebari chaigona kumiririra nguva yekereke iyi.
Nguva yekereke yechina yakaona Pope weRoma achisimuka kuva nesimba pakawira pasi hushe hwenyika yeRoma. Zvino kereke yeRoma ndiyo yakabva yatanga kuuraya nekutambudza vaitenda kuBhaibheri makumi emamiriyoni evanhu vakauraiwa munguva yeRima apo vatendi vechokwadi vaiwanzozvivanza mumakomo nemunhivi dzenzizi. Vatendi vaiungana muchivande kuti vasaonekwe. Hove isingaonekwe inenge iri pasi pemvura ndiyo yaimiririra nguva iyi zvakare. Kereke yeRoma yakaita zvese zvayaigona kuti idzivise kuverengwa kweBhaibheri uye kuti vanhu vasariwane riri mururimi rwavanogona. Saka hakunawo chingwa chebari chaikwanisa kumiririra nguva yekereke iyi.
Nguva yekereke yechishanu yaMartin Luther yakadzosa Shoko rakatanga kuti vakarurama vanorarama nekutenda kwete nemabasa. Vanhu vakaponeswa. Chikamu cheMagwaro chakadzoswa kuvatendi chinomiririrwa nechingwa chebari.
Nguva yekereke yechitanhatu yaive chimwe chingwa chebari apo John Wesley akaparidza hutsvene nekuparidzira zvakatungamirira kunguva huru yemamishinari.
Nguva yekereke yechinomwe yakaona vhuserere yemumugwagwa weAzuza muLos Angelos ichidzosera kubata kwesimba reMweya unoshamisa muna 1906.
Muna 1963 muparidzi wePentekosita aive nezvipo zvikuru zveMweya unoshamisa, William Branham, akashanyirwa nevatumwa vanomwe vakamupa basa rekuzivisa Zvisimbiso zvinomwe kuna Zvakazarurwa Chitsauko 6. zaruriro idzi dzakamugonesa kuzadzisa dzidziso dzemadzibaba mapostora vakanyora Testamente Itsva. Ndicho chaive chingwa chechishanu chekupedzisira.
JOHANE 6:10 Jesu akati: Garisai vanhu pasi. Zvino kwakanga kunovuswa bwuzhinji ipapo. Naizvozvo varume vakagara pasi, kuwanda kwavo kunenge zvuru zvishanu.
Vanhu vakagara pasi zvinoreva kuti Mwari haafadzwi nedzidziso dzinoitwa nevanhu uye kushingirira kwavo. Kuita kwekushingirira kwevanhu kuti vabate nekubata kukuru kunowanzokanganisa kuda kwaMwari. Isu vanhu hatigari kwenguva yakakwana kuti tinzwe kuti Mwari anodei. Tinomhanyira kuita zvinhu kana kutenda zvatinofunga isu kuti zvakanaka.
Vuswa. Huswa kunozvininipisa. Hunomirira kupenya kwezuva. Hunobva hwabereka chishamiso chakaninipiswa kwazvo zvekuti isu vanhu hatichione, huswa kunoshandura simba rezuva kuriita chikafu uye hakuna vanhu vezvesainzi vanokwanisa kutevedzera chishamiso ichi. Tinoziva zvese pamusoro petsananguro yefotosinthesisi, isu hatigoni kutevedzera chinhu chinoitwa nehuswa hwakazvininipisa,husina anoverenga. Kubata kwaMwari kwakareruka kuri mutsanga yehuswa kunogadzira chekudya chemhuka. Chimwe chezvinhu zvisingagoni kuitwa nevesainzi kugadzira chikafu chakanaka.
Zvakadaro zaruriro yeShoko raMwari chiedza chakapa nguva imwe neimwe yekereke chekudya chemweya chakakwana chavaida kuti vapikise kuita kwekereke yeRoman Catholic yaive misikidzo yakasara kubva pakuwira pasi kwehushe hweRoma.
JOHANE 6:11 Zvino Jesu akatora zvingwa; akavonga, akazvipa vakanga vagere pasi; nehove vo saizvozvo pavaida napo.
(Tarisai Zvakare kuna Marko 8:6 Zvino akaraira vanhu vazhinji kuti vagare pasi, akatora zvingwa zvinomwe, akavonga, akazvimedura, ndokupa vadzidzi vake, kuti vaise pamberi pavo, vakazviisa pamberi pavazhinji.
Matoe 15:36 Akatora zvingwa zvinomwe nehove, akavonga, akazvimedura, ndokupa vadzidzi vake, vadzidzi vakapa vanhu vazhinji.)
Chingwa nenyama micherechedzo yedzidziso yeBhaibheri.
Jesu akazvipa kuvadzidzi vake ivo vakazopa kuvanhu vazhinji.
Uyu mucherechedzo wekuti Jesu aizogura chingwa, nemamwe mazwi aizotsanangura chokwadi cheBhaibheri, kuvadzidzi vake. Vaizonyora Testamente Itsva inova iyo yega dzidziso yatinofanira kutenda mairi, nekuti Testamente Itsva inokwana zvakanakisa muTestamente Yekare kuti ibereke kuda kwaMwari kwakazara.
Patinodzidza kubva kuTestamente Itsva tinenge tichiwana Chingwa cheHupenyu kubva kuvadzidzi vaJesu vekutanga vakawana kurudziro yekuti vanyore Magwaro kubva kunaJesu.
Jesu akanamata achivonga. Tinofanira kuvonga kuti Mwari vazodze meso edu nechizoro chemeso kuti tigone kugura Chingwa zvinoreva kuti tinogona kunzwisisa zvakavanzika zveMagwaro. Jesu Munhu Mumwechete akagura chingwa.
Hatizonzwisisi zvakavanzika zveMagwaro nehuchenjeri hwedu hwenyama.
JOHANE 6:12 Zvino vakati vaguta, akati (Jesu) kuvadzidzi vake; Vunganidzai zvimedu zvakasara, kuti kurege kurashika chinhu.
MaJuda vaive vadya vaguta. Vakabva vava vasinehanya vakarasa chimwe chikafu muhuswa.
Ndiko kuita kwevanhu. Tinodya kubva pazvidimbu zveMagwaro zvinotiitira isu nekuti tinenge tinezvatinowana kubva paMagwaro iwayo, torasa Bhaibheri rese. Vanhu vanoti mamwe mavhesi haana kukosha, kana kuti haana kufanira kuva aripo. Izvi zvinongoreva kuti havana maonero egondo akakwana kuti vaone zvakadzama zveMagwaro.
“Kuti kurege kurashika chinhu” kubva pamaonero emweya (egondo) zvinoreva kuti mavhesi anorashwa nerimwe boka, Mwari anounganidza opa kune rimwe boka kuti ridye paari.
Chingwa nehove zvinomiririra dzidziso dzeEvangeri. MaJuda aya vakazadza matumbu avo vaizoramba Evangeri muimba yaPirato yekutonga mavakadanidzira kuti Jesu ndiye ngaauraiwe.
Shoko rakarashwa raive rakamiririrwa nemucherechedzo wemafufu akaraswa.
MaJuda akaramba Evangeri makore 2000 akadarika vadzidzi vakabva vanyora Evangeri iroro muTestamente Itsva kuti rigoita chekudya chekereke kumaHedeni mumakore 2000 enguva dzemakereke.
Ipapo, nhorondo ichizvidzokorora, kereke yemaHedeni yaizoramba chokwadi chakadzorerwa pakupedzisira vosairira Jesu, Shoko, kunze kwekereke munguva yekereke yeRaodikia.
Ndipo patiri nhasi uno.
Isu maHedeni takaramba Shoko rakazara. Tiri kurasa zaruriro yakadzama yeMagwaro patinosarudza zvinofungwa nevanhu zvisina maturo nemaonero evakuru vemakereke edu.
Vatungamiri vemakereke ndivo vanoisa muganhu pazvikamu zveMagwaro zvinofanira kuzivikanwa kuitira kuvanza kusaziva kwavo.
JOHANE 6:13 Ipapo vakazvivunganidza, vakazadza matengu anegumi namaviri nezvimedu zvezvingwa zvishanu zvebari, zvakanga zvasara kuna vakadya
Saka Shoko rakazara rakadzoserwa, panguva yekupedzisira nguva yekereke yechinomwe, riri kurambwa nemakereke edu anhasi asi Mwari achariunganidza rese oripa kumarudzi gumi nemaviri aIsraeri munguva yeKutambudzika kukuru.
JOHANE 6:14 Zvino vanhu vakati vavona chiratidzo chaakaita, vakati: Zvirokwazvo uyu ndiye uya muporofita, unovuya panyika.
MaJuda aive aona chishamiso chezvenyika ino. Jesu aive asingadi rubatsiro rwavo kuti aite chishamiso ichi. Asi zvino pakarepo vakafunga kuti aida rubatsiro rwavo kuti vamuite mambo. Vaive vakazvipira kumanikidzira mifungo yavo yenyama paari.
JOHANE 6:15 Zvino Jesu, zvaakaziva kuti vodo kuvuya kumubata nesimba kuzomuita mambo, akabva zve akaenda mugomo ari oga
Evangeri raJohane rinotizivisa Jesu ari Mwari, Mweya Mutsvene mukuru unomiririrwa nemucherechedzo weGondo rinobhururuka. Gondo rinozivikanwa nekuona kwaro kunodakadza. Rinoona chero zvinhu zviduku zviri kure zvisingaonekwe nevakawanda.
Jesu aive asingadi zvinzvimbo zvepasi rino. Aive asingadi humambo hwekugadzwa nevanhu. Aiziva kuti zvaisazogara sezvo vanhu vachikoshesa kuzvipfumisa pachavo. Gomo, rakaoma kukwira, raive mucherechedzo uri pachena wehushe hwakanaka hunogara. Izvi zvinotsanangurwa nevhesi reBhaibheri pamusoro pegomo reZioni, rinomiririra musha wedu unouya.
Gomo ndiro rakaonekwa naDanieri rakakurira muchiratidzo chake apo Dombo rakarova tsoka dzemufananidzo wemuHedeni. Gomo iroro mucherechedzo wemakore 1000 erugare anotevera mumashure meAmagedhoni. Ndiko kuchave kuraira denga kwekutanga tiri panyika. Ndihwo huchava hushe hwekutanga hwakanaka. Saka Jesu akasiya vanhu vaive vasina kuvimbika ava. Aiziva kuti vanhu vamwechete ivavo vakamurumbidza musi weSvondo yeMurara vachave ivo zvakare vachada kuti arovererwe vhiki raitevera musi weChishanu. Ndiko kuita kwerumbidzo yevanhu.
Jesu aida kutaurirana neMweya waMwari waigara maari, kuti atungamirirwe, aibva pavanhu nemifungo yavo. Jesu aiziva kuipa kuri pakudavira rumbidzo yevanhu nemazano evanhu neshuviro dzavo.
Tinowana hutungamiri hwemweya hwechokwadi kubva kuna Mwari ari matiri, kwete kubva kuvanhu vakatipoteredza.
Tiri tega, tinokwanisa kuwana kutungamirirwa naMwari, kana achigara matiri saMweya Mutsvene. Kana tisingawani kutungamirirwa, tinoguma tichitongwa nevanhu uye kufurirwa netsika dzemakereke edu.
JOHANE 6:16 Zvino ava madekwana, vadzidzi vake vakaburukira kugungwa;
Madekwana mucherechedzo wekereke panguva yekupedzisira. Jesu ari kunze kwekereke munguva yekereke yekupedzisira yeRaodikia. Apa chero vadzidzi vaive vakatsaurwa kubva kuna Jesu.
Vakaita sarudzo vari boka vakakanganwa kuti Jesu, aive asiri pakati pavo.
JOHANE 6:17 Vakapinda mugwa, vakatanga kuyambuka gungwa kuenda Kapernaume. Zvino kwakanga kwasviba, asi Jesu wakanga asati asvika kwavari.
Saka vadzidzi vakabuda vakananga Kapenaume. Ndiko kwakaitwa zvishamiso zvikuru naJesu munguva yaive yadarika.
Kwaive kwasviba vakasimuka kuenda vasina Jesu Chiedza chenyika.
Izvi mucherechedzo wekereke yenguva yekupedzisira yeRaodikia. Jesu ari kunze kwekereke uye vose vakananga ritivi risirirwo.
Vadzidzi vaive vatanga rwendo rwusirwo. Mhepo mucherechedzo wehondo nekutambudzika. Tinoona hondo, vapoteri, materorisiti, uye kuparara kwemaguta anenge abhombwa. Zvino hondo dzezvekutengeserana. Kusagadzikika munezvehupfumi.
Mhepo yeshanduko inovhuvhuta panyika. Kubata kwemhere yeyambiro.
JOHANE 6:18 Gungwa rikatanga kumutswa nemhepo huru yaivhuvhuta.
Johane akatipa muono wakati jekei pamusoro paMwari, Mweya Mutsvene mukuru. Haana kuti mhepo yaive yakaipa. Haana kutaura kuti vakatambudzika kutyaira. Zvese zvinhu zvenyama.
Vaive vachienda nzvimbo isiyo saka Mwari akatumira hondo huru kuti avabvise parwendo rwavo rwavaida avaise parwendo rwaMwari rwaaida.
Ndicho chikonzero chikuru nei tichisangana nekuomerwa kukuru. Mwari arikuda kubvisa mifungo yedu kubva mundangariro dzedu kuti atifambise nenzira yake.
Mukati mezviitiko zvese zvenyika, Mwari anoda kuti tikoshese kudzokera pakutenda kwekereke yekutanga.
Miti inokura zviri nani kana ikapazurirwa.
Tese tinoda kugurirwa kuti tive nekuita kwakanaka. Asi kupazurirwa kunorwadza.
JOHANE 6:19 Zvino vakati vakwasva zvikuru mastadia anenge makumi maviri namashanu, kana makumi matatu,* vakavona Jesu achifamba pamusoro pegungwa, achiswedera pedo negwa; vakatya.
Mumaira rimwechete mune mastadia masere. Saka vaive vatyaira mamaira matatu kana mana kubva kumahombekombe. Gungwa reGarirea rine mamaira manomwe kwarakakurira kwaro. Saka vaive vasvika nechepakati pegungwa. Saka vaive vava kure nenyika uye nerubasiro rwevanhu. Kutyaira kwavo kwaive kusingavaendese kuKapenaume kwavaida kuenda nekuti mhepo yaivaendesa rumwe rutivi.
Kuita kwekushingirira kwavo kwevanhu hakuna kwakwakavasvitsa. Vaive vari pasi pezviitiko zvaivawira.
Asi mhepo yakaitwa kuti ivashaise zvekuita. Vanhu vanenge vapererwa vasisazive zvekuita vanoziva kuti vanovimba naMwari.
Vanhu vasina matambudziko vakadekara vanonyepera kunge vanoda Mwari kwazvo.
Kereke yeRaodikia yakapfuma, ine zvinhu zvizhinji, uye haidi chiro, chero kugadziriswa pavanenge vatadza. Vatendi venguva yekupedzisira vanonzwa kunge vakatosvika.
Saka Mwari anoda kutumira mhepo yenguva dzinorwadza kuti asanganise vanhu.
Pakati pematambudziko avo ese, vari kure nerubatsiro rwevanhu, Jesu akauya kuzovatsvaga.
JOHANE 6:20 Asi iye akati kwavari: Ndini, musatya.
Huvepo hwake ndihwo hunogadzirisa matambudziko avo.
Chavaifanira kuita chete kumutambira mumugwa wavo.
Matambudziko edu muhupenyu akaitirwa kuti tigamuchire kuzara kweShoko mumoyo yedu.
Asi tinofanira kugamuchira Jesu nekuda kwedu, kwete nekuda kwezvinangwa zvakaipa. Kwete nekuda kwetarisiro yekupfuma. Tinofanira kumubatira maererano nekuda kwake, kwete nekuda kwekuda kwedu kana kuda kwekereke dzedu.
JOHANE 6:21 Zvino vakafara kumugamuchira mugwa, igwa rikasvika pakarepo kunyika kwavakanga vachienda.
Uku ndiko kutsanangurwa kwakaitwa Jesu naJohane sechisikwa chipenyu chechina chakapoteredza chigaro chaMwari chehushe, Gondo rinobhururuka. Zvichireva kuti Jesu ndiMwari.
SeGondo, Jesu anouya kuzosangana nekereke yake kumakore.
Pakarepo zvese zvinenge zvadarika. Pane pasina chinhu chakataurwa nezvapo. Pane chisipo. Mwenga waKristu haapindi munguva yeKutambudzika kukuru.
Vaive vari pakati peGungwa rakakura mamaira manomwe. Saka vachiri nemamaira matatu nehafu kuti vasvike. Mamaira matatu nehafu aya angoita seadzimwa kubva pakunyora kwaJohane sekunge aive asipo zvachose.
Izvi zvinomiririrei? Makore matatu nehafu enguva yakaomarara yerwendo rwemunhu panyika, anodaidzwa kuti nguva yeKutambudzika kukuru.
Kuuya kwechipiri kwaShe kunotora kereke kubva panyika ino kuenda kumuchato neGwaiana kuDenga.
Pane mukana wenguva inoda kuita makore matatu nehafu vasati vaoneka zvakare kuAmagedhoni nemakore 1000 erugare muhushe hutsva.
Marko anotiudza kuti vakayambukira vakanosvika paGenesareti.
MARKO 6:53 Vakati vayambukira mhiri, vakasvika kunyika yeGenesareti, vakasungira igwa pamhenderekedzo
“Vakayambukira”. “Kuyambukira” zvinorevei.
Johane akataura pamusoro pemutambo wePaseka vanhu vanezviuru zvishanu vasati vapihwa chekudya. Saka “kuyambukira” kwakakosha.
Kukosha kuri paPaseka kuri pazvikamu zviviri.
Totenda kuchibairo chaJesu seGwaiana rePaseka akafira zvivi zvedu, tinokwanisa “kuyambuka” gehena tisina kupinda mariri. Ndirwo ruponeso. Zvakaitika pakutanga kwenguva dzemakereke. Jesu akaripira muripo pakutanga saka anodaidzwa kuti Arfa.
Pakupedzisira kwenguva dzemakereke tinaye Omega apo Jesu anotinunura kuti “tiyambuke” nguva yeKutambudzika kukuru toenda kumutambo wemuchato. Ndirwo rubapatidzo rweMweya Mutsvene runodzosera Shoko raMwari rakazara.
Genesareti zvinoreva kuti munda wepfuma. NaJesu mugwa ravo vakagadzwa nhaka dzepfuma yeDenga. Mhepo yehondo yenguva yekupedzisira nekutambudzika zvakagadzirirwa kuti zviite kuti titende Shoko raMwari rakadzoserwa zvakazara sezvo ndiro rega rinotigadzirira kuti tinosangana naShe paanouya. Shoko raMwari rakazara ndihwo hupfumi hwechokwadi hwatinofanira kutsungirira kuti tiwane.
JOHANE 6:22 Ava mangwana vanhu vazhinji, vakanga vamire mhiri kwegungwa, vakavona kuti pakanga pasine rimwe igwa duku ipapo, asi iro rimwe makanga mapinda vadzidzi vake, mariri, vuye kuti Jesu haana kupinda mugwa navadzidzi vake, asi kuti vadzidzi vake vakanga vaenda voga.
Vazhinji vaive vapihwa zvekudya vakabva vaenda kune rumwe rutivi, kuti vanowana kumwe kudya kwemahara. Vakangoona mugwa waive washandiswa nevadzidzi kuyambukira nawo. Vaiziva kuti Jesu aive asina kupinda mugwa iwoyo pakaenda vadzidzi vake. Saka havana kuziva kuti Jesu aivepi.
Kutevera kuzviwanira zvinhu zvenyama, vakarasikirwa nekuona Jesu.
JOHANE 6:23 (Asi mamwe magwa maduku akanga abva Tiberiasi, akasvika pedo pavakadyira zvingwa, Ishe ambovonga).
Mukudisa kwavo kudya kwemahara, vakatyaira kuenda mhiri kwegungwa reGarirea vachibva Tiberio kwaive kwamboitwa chekudya naJesu. Asi aive asiko. Vanhu vanozviwanira zvimwe zvinhu kubva pamabasa emweya unoshamisa vane rudo rwenguva duku neShoko raMwari, vanoti chero vachiri kuramba vachizviwanira chete vanoritevera.
JOHANE 6:24 Zvino vanhu vazhinji vakati vavona, kuti Jesu haapo, navadzidzi vake, vakapinda vamene mumagwa maduku, vakasvika Kapernaume, vachitsvaka Jesu.
JOHANE 6:25 Zvino vakati vamuwana mhiri kwegungwa, vakati kwaari: Rabi, mavuya pano riniko?
Vaive vashamiswa. Aive asina kupinda mugwa nevadzidzi vake asi aive asvika mhiri kwegungwa.
JOHANE 6:26 Jesu akavapindura, akati: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Hamunditsvaki nokuti makavona zviratidzo, asi nokuti makadya zvingwa mukaguta.
Chinhu chikuru panyaya iyi ndechekuti vaitsvakira Jesu zvikonzero zvakaipa. Vaida kudya kwemahara zvakare. Isu vanhu tine makaro akanyanya ekuda kuzviwanira pfuma nezvinhu zvenyama.
JOHANE 6:27 Musabatira zvokudya zvinopera, asi zvokudya zvinogara kuvupenyu bwusingaperi, zvamuchapiwa noMwanakomana womunhu; nokuti Baba, vakaisa chisimbiso kwaari.
Hatifaniri kuvimba nezvinhu zvenyika sezvo hazvigare nguva refu. Tinofanira kukoshesa zvinhu zvemweya. Hupenyu husingaperi huri munaKristu. Iye ega ndiye tsime reMweya Mutsvene, watinofanira kutsvaga. Mweya Mutsvene ndiwo wega unogona kutora mweya yedu kuenda kuDenga. Jesu ega ndiye anokwanisa kuzarura Bhuku reZvisimbiso zvinomwe redzikinuro kuti zvakavanzika zveMagwaro zviziviswe.
JOHANE 6:28 Zvino vakati kwaari: Tichaiteiko, kuti tibate mabasa aMwari?
Apa vaive voda kwazvo kudzidza kuti mabasa aidiwa kuti vaite naMwari akadii. Nzira inoshandiswa pamabasa ezvechitendero kuti vaponeswe nemabasa avo.
JOHANE 6:29 Jesu akapindura, akati kwavari: Basa raMwari ndiro, kuti mutende kuna iye waakatuma.
Asi ruponeso runouya nekutenda, kwete nemabasa. Vanongoda kuziva kuti vanofanira kutenda munani.
Basa rimwechete ratingaitire Mwari nderekutenda munaJesu ndiye Shoko. Vesainzi vanokwanisa kuita tsananguro yeBig Bang kana tsananguro yavo yekushanduka kwevanhu vachibva mumhuka inodaidzwa kuti ivhorusheni, asi kana muchida kuita basa raMwari munofanira kuramba muchitenda muBhaibheri kwete kurasa kutenda muBhaibheri muchitevera tsananguro dzeSainzi.
Hakuna munhu akaona denga nenyika pakutanga. Saka vesainzi vanongofungidzira pamusoro pemavambo edenga nenyika uye kutanga kwehupenyu. Havana humbowo hwavati vaburitsa nanhasi, asi fungidzoro dzega dzezvavanofunga kuti zvakaitika. Kushaiwa humbowo hwezvakaitika chaizvo pakutanga hadzisi sainzi dzakanaka.
Mwari akashandisa vanhu vakasiyana kudzosa chokwadi mukati menguva nomwe dzemakereke. Tinoshandira Mwari nekuziva kuti Mwari ari kushandisa ani kuzadzisa Shoko rake. Mwari anokwanisa kushandisa mumwe munhu watisingadi. Ipapo tinofanira kushandura mafungiro edu kuti tisawanikwe tiri pachinzvimbo chekupikisa munhu anoshandiswa naMwari kuzadzisa Shoko rake.
Kuzadzisa Magwaro ndiro basa raMwari chairo.
JOHANE 6:30 Zvino vakati kwaari: Munoita chiratidzo chipiko, kuti tivone, tikutendei? Imi munobateiko?
Uku ndiko kuipa kwekutarisira zviratidzo.
Ndiko kuipa kwekuvimba nezviratidzo.
Munoda zviratidzo zvingani musati matenda?
Vaive vaona vanhu zviuru zvishanu vachipihwa chekudya kubva pambuva yemwanakomana. Vaive vaona kuti Jesu aive ayambuka gungwa raive rakasimudzwa mafungu nemhepo husiku asina mugwa.
Asi vaikumbira chishamiso, chiratidzo.
Vaive vachitsvaga munhu aiizoita zviratidzo zvemweya aizogara achiita zvishamiso pavadira kuti vafare.
Vaive vakanganwa zvishamiso zvikuru zvese zvaaive aita kare paKapernaume.
MATEO 11:23 Iwe Karpenaume uchasimudzirwa kudenga here? Uchaburukira kuHadhesi nokuti dai iwo mabasa esimba akaitwa mukati mako, akaitwa muSodoma ringadai richipo nanhasi.
JOHANE 6:31 Madzibaba edu akadya mana murenje, sezvazvakanyorwa, zvichinzi: Wakavapa chingwa chakabva kudenga, kuti vadye.
Vakayeuchidza Jesu pamusoro pemuprofita mukuru Mosesi akatungamirira Eksodo pakawa mana kubva kudenga. Ichi chaive chishamiso. Dai vaivepo vangadai vakatevera Mosesi pachokwadi.
JOHANE 6:32 Zvino Jesu akati kwavari: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Wakanga asi iye Mosesi, wakakupai chingwa chakabva kudenga, asi ndiBaba vangu vanokupai chingwa chazvokwadi, chinobva kudenga.
Jesu akavayeuchidza kuti Mosesi haana kugadzira mana. Asi Mwari ndiye akaita mana. Saka zvaive zvaitwa naJesu apa zvaive zvikuru kudarika zvakaitwa naMosesi, nekuti aive Jesu aive aita chingwa chakabikwa kare nehove dzakabikwa kare.
Saka Jesu, akatumwa naMwari, aive nechingwa chechokwadi Shoko raMwari rinogutsa mweya yedu.
JOHANE 6:33 Nokuti chingwa chaMwari ndiye unoburuka achibva kudenga, unopa nyika vupenyu.
Chingwa chimwechete chinogona kugutsa vanhu vashoma kwazvo. Chingwa chekudya chinogutsa dumbu chinoita kuti vanhu vakoshese zvenyama. Vakafadzwa nechekudya chenguva duku. Jesu anopa hupenyu husingagumi kumunhu wese. Hupenyu husingagumi hunogona kusvika kuvanhu vazhinji, kwete vashoma. Ipapo tinotanga kukoshesa vamwe vanhu kwete isu pachedu.
JOHANE 6:34 Zvino vakati kwaari: Ishe, tipei chingwa ichi misi yose.
Vanhu vaida chingwa ichi. Vakafunga kuti chaive chimwe chinhu chekudya chaizoita kuti vasanzwe nzara zvakare.
JOHANE 6:35 Jesu akati kwavari: Ndini chingwa chovupenyu; unovuya kwandiri, haangatongovi nenzara, nounotenda kwandiri haangatongovi nenyota.
Kuberekwa ari Chingwa cheHupenyu, akaradzikwa muchidyiro chaive nechimiro chakaita sechechingwa. Herode aida kumuuraya mucherechedzo wekupisa kwemudziyo wekubikira Chingwa cheHupenyu. Pakupedzisira mauto akamusvipira nekuti chingwa chinomedzeka chete kana chatsengwa chasanganiswa nemate.
Aive Chingwa cheHupenyu chechokwadi.
KuDenga kuchange kusina nzara kana nyota.
Pamunongotanga kutenda kuBhaibheri mweya yenyu haizonzwi nzara yezvitendero zvisiri muBhaibheri. Zvinobva zvashaiwa basa kwamuri zvachose. Shoko raMwari rinobva raita chingwa chinogutsa mweya yenyu.
Chero nyota yedoro inonyangarika sezvo waini yechokwadi yekusimudzwa kwezaruriro dzekunzwisisa Magwaro inopindira nekukunda.
JOHANE 6:36 Asi ndakakuvudzai, kuti makandivona, asi hamutendi.
Kune vasingatendi hazvibatsiri kuona zvishamiso. Hazvitobatsiri chero vakaona Jesu. Kana munhu achida kuva asingatendi hakuna chinogona kushandura pfungwa dzake. Chero humbowo hunoratidzwa kumunhu asingatendi muna Mwari, simba remunhu iyeye rekuita kuda kwake rinokurira nekuramba humbowo hwezvaasingadi kutenda mazviri.
JOHANE 6:37 Zvose Baba zvavanondipa zvichavuya kwandiri; nounovuya kwandiri, handingatongomurashiri kunze.
Mwari ndiye mukwezvi wemukati. Anotikwezva kuShoko rake Jesu. Uye ani nani anouya kuna Jesu, chero mbavha yaive yatarisana nerufu pamuchichikwa, Jesu haana kumurasa.
JOHANE 6:38 Nokuti handina kuburuka kudenga, kuti ndiite kuda kwangu, asi kuda kwowakandituma.
Hatigoni kushandira Mwari kana tichiita kuda kwedu.
ISAYA 55:8 Nokuti ndangariro dzangu hadzizi ndangariro dzenyu, nenzira dzenyu hadzizi nzira dzangu ndizvo zvinotaura JEHOVA.
Nzira dzaMwari dziri pamusoro kwazvo pezvose zvatingafunge nezvazvo. Saka zvese zvatingaite musimba redu renyama nenjere dzedu kutambisa nguva.
ZECHARIA 4:6 Ipapo akapindura, akataura neni, achiti, "Ndiro shoko raJEHOVA kuna Zerubaberi, rinoti, `Hazviitwi nehondo kana nesimba, asi noMweya wangu,' ndizvo zvinotaura JEHOVA wehondo.
Tinofanira kufa pazvivi zvedu uye pakuita kuda kwedu kuti tirarame muKuda kwaMwari.
JOHANE 6:39 Uku ndiko kuda kwababa vakandituma kuti, pazvose zvaakandipa, ndisarasikirwa nechinhu, asi kuti ndichimutse nezuva rokupedzisira.
Tinofanira kuvimba naMwari. Mwari haangasiyi chero mumwechete wevana vake. Kana, mumashure mekufa kwedu, Mwari anokwanisa kutipa hupenyu murumuko, kana tikafa kuzvivi zvedu anotipa kuda kurarama hupenyu hwaanoda iye kuti tirarame.
JOHANE 6:40 Nokuti kuda kwaBaba vangu ndiko, kuti mumwe nomumwe, unotarira Mwanakomana, nokutenda kwaari, ave novupenyu bwusingaperi; neni ndichamumutsa nezuva rokupedzisira.
Jesu ndiMwari pamuviri wenyama. Mwari akaratidzwa. Kana tikatenda kuti Jesu ndiMwari, Mwari anesu Munhu pakati pedu vanhu, tinenge taona butiro raive rakavanda Mwari mariri.
Munhu anoonekwa ndiye Mwanakomana waMwari asi Baba ndiye Mweya usingaonekwe weHupenyu waive maari.
Nenzira imwechete yekuti mune hupenyu husingaonekwe huri muchingwa. Asi tinowana hupenyu ihwohwo kana tikadya chingwa chikapinda matiri kuti tiwane simba kubva kwachiri.
JOHANE 6:41 Zvino vaJuda vakan’un’una pamusoro pake, nokuti wakati: Ndini chingwa chakaburuka kudenga.
MaJuda havana kugona kuona kusi kwemeso avo enyama. Vakafunga kuti chingwa chinobva kudenga chingwa chaizoburuka sezvakaita mana yakaburuka parwendo rweEksodo. Vaive vasina maonero emweya. Havana kugona kuona kuti chingwa chaive mucherechedzo weShoko raMwari.
Vanhu vanoverenga kuti Adamu naEva vakadya muchero voramba vachiti waive muchero wekutemha mumuti seapura kana chimwe chinhu. Asi havagoni kutsanangura kuti nei Adamu naEva vakapihwa mirango miviri yakasiyana asi ivo vakatadza chinhu chimwechete. Mwari akaranga Eva nekuwedzera kubata mimba kwake. Kana aive abata mimba, zvinoreva kuti aive azvitakura. Saka chivi chekutanga chinhu chakadzama kudarika kudya apura kana mumwe muchero unotemhwa mumuti. Hazvishamisi kuti nei vasingatendi vachipikisa kwazvo kuti akarangwa nekuzvara vana nekuda kwekuti akadya apura. Kuzvara mwana ndiwo murango mumwechete waisakwanisa kugovanwa naAdamu, asi aive adya muchero mumwechete uyu.
Saka sezvazvaive mumazuva aJesu, vanhu havagoni kuona zvakadzama mumicherechedzo iri muBhaibheri.
JOHANE 6:42 Vakati: Uyu haazi Jesu, Mwanakomana waJosefa, watinoziva baba namai vake here? Zvino ungagoti seiko: Ndakaburuka kudenga.
Zvino vaakatarira Jesu nameso enyama. Vaiziva Josefa naMaria vakataura kuti vaive vabereki vake. Asi havana kutarisa zvakadzama vakafuratira humbowo hwaisafambirana netsananguro dzavo. Maria paakabata mimba akaenda kumba kwaErisabeta kwemwedzi mitatu, ndipo paakazodzoka kuzoroorana naJosefa. Ndiyo yaive nyaya yezuva iroro. Aive atova nemimba kare paakauya kuzochata, saka Jesu aive asiri mwanakomana waJosefa, kunyanya kana tichitarisa kuti akaberekwa mwedzi mitanhatu mumashure memuchato.
Muhurongwa hwaMwari, kana musina kugadzirira kufunga zvakadzama, munogarowana mhindiro isina kusimba inorwisa chokwadi chakadzama.
Sezvaiitwa nevesainzi vaitenda kuti maatomi anoonekwa uye akabatana sezvo ari ndiwo anoita zvinhu zvese zvinobatika zvatinoona. Asi aive maonero akaipa pamusoro peatomi.
JOHANE 6:43 Jesu akapindura, akati kwavari: Musan’un’una pakati penyu
Vanhurume nevanhukadzi vakaberekwa vasingatendi. Vanhu vanogarokakavadzana neShoko raMwari kana riine chirevo chemweya chakadzama. Vanhu vanogona chete kuona nyika nezviri mairi voramba Mwari nekuti havamuoni munyika nemeso avo enyama.
Kunosangana denga nenyika kwatinoona ndiko muganhu wemeso edu enyama izvi ndizvo zvinofanira kuva yambiro kwatiri yekuti mafungiro edu enyama ane muganhu. Tinofunga kuti zuva rinofamba richidarika nedenga zuva rega rega asi tinozoona kuti inyika inotenderera pariri. Asi hationi kana kunzwa nyika ichifamba. Saka pakarepo tinobva tadzidza kusavimba mune zvatinoona nekunzwa nekuti pfungwa mbiri idzodzo hadziwanzotiudzi chokwadi. Kana makamira panyika munofunga kuti makamira panzvimbo imwechete nekuti hamunzwi kuti nyika iri kufamba.
Kana mukaona motokari ichifamba kubva pamakamira, munofunga kuti makamira panzvimbo imwechete. Asi kana muri mumotokari, munoramba muchifunga kuti muri panzvimbo imwechete asi zvimwe zvinhu zvese zviri pamberi penyu zvinobva zvatanga kufamba zvichiuya kwamuri. Saka hamugoni kuwana chokwadi chaicho zvichibva pakuvimba nemaonero enyu enyama. Munofanira kutsvaga chokwadi chakadzama.
Saka vasingatendi vanokakavadzana naMwari zvichibva pamaonero avanoita zvinhu zvinobatika kana zvinoonekwa nemeso enyama. Havagoni kumuona. Asi zvinhu zvinoonekwa kana kubatika hazvigoni kutiudza chokwadi chemaatomi kana chokwadi chezvakaita Mwari. Tinofanira kudzidza kufunga zvakadzama kana tichida kunzwisisa pamusoro pemaatomi, kana Mwari, kana chero mafungu mugungwa.
Zvinoita sekuti mvura inoenda kunyika nekusanganiswa kwemafungu kwepamusoro, asi hazvisizvo. Simba sekudonha kana kudhonzera mudenga remwedzi rinoita mvura isimuke mugungwa pasi pemwedzi. Zvino nyika, painotenderera, inoita kuti nyika ifambe ichipinda nepamvura iyi. Saka zvese zvinopikisa zvamunoona nezvamunofunga. Inyika inofamba ichipinda mumvura inoita kuti mafungu asimuke.
Tinonyengerwa zviri nyore nezvatinofunga kuti zviri kuitika munyika yatinoona.
Tinozonyengerwa zviri nyore zvakadii nezvinoitika munzvimbo dzemweya.
JOHANE 6:44 Hakuno munhu ungavuya kwandiri, kana Baba, vakandituma, vasingamukwevi; neni ndichamumutsa nezuva rokupedzisira.
Simba rekukweva risina anorinzwisisa nekuti nyika inotikweva. Kukweva hakunzwisisiki. Kusairira kuri nyore. Mukaisa ruoko rwenyu rwakatambanudzwa pamukova wakazarurwa munokwanisa kuuvhara zviri nyore.
Isai ruoko rwenyu rwakatambanudzwa pamukova wakavharwa moedza kuukweva. Hazvigoneki. Kuti mukweve mukova munofanira kubata mubato. Asi kana ruoko rwenyu rwuri pamusoro pemubato, zvigunwe zvenyu zvinenge zviri kuseri kwemubato ndizvo zvinokwevera mukova kwamuri.
Saka kukweva chinhu munofanira kuchibata nezvigunwe zvenyu, munofanira kupeteka gokora renyu muchikwevera chinhu kwamuri. Zvakanyanya kukosha, munofanira kuva nepfungwa dzekudzoreredza zvese zvinenge zvichiitika.
Nyika haina pfungwa, haina gokora rinopeteka, haina zvigunwe zvinobata chinhu. Saka nyika inotikwevera kwairi sei? Hatizivi zvachose.
Simba rekukweva rakavanzika. Chii chinoriita kuti ritikweve? Vesainzi havatozivi kuti simba rekukweva rinoshanda sei.
Zvakafanana nemunyika dzemweya. Hatina ruzivo zvachose kuti Mwari anotikwevera kwaari sei kana kuti anotiita kuti titende kuBhaibheri sei, kusanganisira zvikamu zvakaoma zvatinotambudzika kunzwisisa.
Jesu ndiye Shoko. MaKristu akazvarwa patsva anokweverwa kuShoko vowana kuti Bhaibheri rinokwanisa kutendwa mariri uye kudiwa, zvisinei nezvakaoma zviri mariri. Asi Mwari anenge atikwevera kuBhaibheri uye Mwari anofanira kuzarura meso edu kuti titende mariri.
Mwari anozviita sei? Sesimba rekukweva, hatizivi kuti anozviita sei.
Asi panofamba Mweya waMwari uchipinda muhupenyu hwemunhu, munhu iyeye anoshanduka vatadzi vanoshanduka kuita vatsvene. Vasingatendi vanoita vanotenda.
Chatinogona kuita chete kutendeuka togamuchira Jesu muhupenyu hwedu. Iye ega anokwanisa kutisimudza kubva mukutadza kwedu uye rufu rwemweya nekusatenda. Pakupedzisira iye ega ndiye anotimutsa kuvakafa parumuko.
JOHANE 6:45 Muvaprofita makanyorwa, muchinzi: Vachadzidziswa vose naMwari. Mumwe nomumwe wakazvinzwa kunaBaba, akadzidza, unovuya kwandiri.
Maprofita akanyora Shoko. Tinodzidziswa kubva paShoko rakanyorwa. Mwari ndiye mukwevi akavanzika watisingaoni. Anotikweva nenzira yatisinganzwisisi. Asi patinodzidza kubva kuMagwaro tinozoona tichiswedera zvakanyanya kuna Jesu.
Tinoda Jesu chete kana tichida nekuterera Magwaro.
JOHANE 14:15 Kana muchindida, chengetai mirairo yangu.
Kuda Jesu hakusi kungomuda kwekutaura. Isimba uye rudo rwekutenda muShoko rimwe nerimwe riri muBhaibheri. Ipapo tinofanira kubva taterera zvinotaurwa neMagwaro.
JOHANE 6:46 Handirevi kuti kuno munhu wakavona Baba; asi uyo uri waMwari, ndiye wakavona Baba.
Simba rekukweva rinotiita kuti timire kana kugara panyika harionekwe. Uye hapanawo akaona Mwari. Munhu mumwechete akaona Mwari ndiJesu nekuti ndiye Mwari panyama.
Saka kana Mwari, ari muna Jesu, akatikweva tinobva taswedera kunaJesu, Shoko. Patinoswedera kuShoko tinoda Bhaibheri zvakanyanya toriterera zviri nani. Tinoramba kuona zvakaipa kune watinoda. Saka munhu anoda Bhaibheri haagoni kutambira kuti mune zvakakanganiswa kana kuti pane kurwisana muBhaibheri. Tinofanira kuedza zvakanyanya kuti tione chokwadi chakadzama cheMagwaro.
JOHANE 6:47 Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Unotenda, kwandiri unovupenyu bwusingaperi.
Kiyi imwe yatinayo yehupenyu husingagumi kutenda shoko rimwe nerimwe riri muMagwaro. Ihondo inoenderera mberi kuti tigonzwisisa zvese, asi tinofanira kutenda kuti zvese ndezvechokwadi. Hapana musiyano pakati paJesu neBhaibheri. Kana mukaramba zvidimbu zveBhaibheri, munenge maramba zvidimbu zvaJesu. Izvi hazvina kuchenjera.
JOHANE 6:48 Ndini chingwa chovupenyu.
“Mudikanwa” (“Companion”) rakabva pamazwi maviri “com” zvinoreva kuti naye uye “panis” zvinoreva kuti chingwa. Mudikanwa aive munhu wawaigovana chingwa naye.
Bhaibheri rinofanira kuva mudikanwa wedu watinowana mazano, kurairwa, kutungamirirwa uye kurudziro kubva kwariri.
Pamweya, kugura chingwa kuzarurwa mavhesi eBhaibheri totendera Magwaro kuturikira mamwe Magwaro patinoteveta dzidziso muBhaibheri rese.
JOHANE 6:49 Madzibaba enyu akadya mana murenje, akafa.
Mwari akakomborera maJuda nemakomborero ezvinhu zvenyika ino, kusvika pakunaisa chikafu kubva kudenga. Chishamiso chinodakadza. Asi vose vakafa. Mwari paanotikomborera nezvinhu zvenyama, hazvirevi kuti tinenge tichimugonera.
MaJuda murwendo rweEksodo vakaona zvishamiso zvakanakisa kwazvo asi havana chavakaitira kutenda kwavo. Vakangosarudza kusatenda. Zvishamiso zvinongoriko kuvanhu vese. Kutenda kuShoko raMwari ndicho chinhu chikuru.
JOHANE 6:50 Ichi ndicho chingwa, chinoburuka kudenga, kuti munhu achidye, arege kufa.
Kune kufamba kwakadzama naMwari. Vanhu vazhinji vanogutswa nemakomborero aMwari ezvinhu zvenyika ino. Ndicho chinhu chikuru chavanoda kubva kuna Mwari. Mwari anofanira kuvapa zvese zvavanoda pazvido zvavo. Ava ndivo vasikana mapenzi vaya vakapusa.
Zvino kune vasikana vakangwara. Havana kuda kwavo kwavanoita. Vanovimba naMwari kuti avape zvese zvavanoda asi izvi hazvina kukosha kwavari. Chido chavo chikuru kunzwisisa nekuterera Magwaro kuti vazadzise kuda kwaMwari, Muono wake Mukuru. Hupenyu Husingagumi hunotiita kuti tive chikamu chezano raMwari kurudzi rwevanhu.
JOHANE 6:51 Ndini chingwa chipenyu, chakaburuka kudenga; kana munhu achidya chingwa ichi; uchararama nokusingaperi; chingwa chandichapa, inyama yangu, bwuve vupenyu bwenyika.
Inodaidzwa kuti puropaganda kunyengera pfungwa dzevanhu nekuzviratidzira nenzira yechiedza chakanakisa. Idzi ndidzo nheyo dzeevangeri rekubudirira. Shandirai Mwari mupfumiswe.
Jesu pano akaita zvaipikisa izvi. Akapa chokwadi cheMagwaro asina kubhabhadzira vanhu zvaisafadza pfungwa dzevanhu dzenyama.
Jesu anoziva kuti hakuna angamutevere kunze kwekunge munhu azvarwa patsva. Saka haana kunyepera kuti Evangeri yaive nzira yakareruka kana ine mbiri.
JOHANE 6:52 Zvino vaJuda vakakakavadzana pakati pavo, vachiti: Munhu uyu ungatipa seiko nyama yake, tidye?
Jesu haana kunyengerera kuti vanhu vamutevere. Haana kutaura zvinhu zvekukwezva ruzhinji. Akaparidza chokwadi chakadzama kuvanhu vaigona kufunga nenzira yakaneta kwazvo, nzira yenyama yaitaura kuti ivo vaifanira kuita makanibhari anodya nyama yevanhu.
JOHANE 6:53 Jesu akati kwavari: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Kana musingadyi nyama yoMwanakomana womunhu, nokumwa ropa rake, hamunovupenyu mamuri.
Akapinda muzvinhu zvakadzama zvisiri zvenyama kanapinda munzvimbo dzemweya. Hupenyu Husingagumi haunei nechekuita nemiviri inochembera nekufa nekufamba kwenguva.
JOHANE 6:54 Aninani unodya nyama yangu, nounomwa ropa rangu, unovupenyu bwusingaperi; ini ndichamumutsa nezuva rokupedzisira.
Vaive vapesana nechinhu chikuru zvakazara. Kuti tigone kurarama panyama tinofanira kudya kuti tiwane zvinodiwa nemiviri uye kunwa mvura kuti tisuke mukati medu. Mukati medu munoda kunatswa uye kusukwa nemvura sezvinongoita miviri yedu inoda kugezwa nemvura.
Uyu mucherechedzo wehupenyu hwemweya. Tinofanira kudya paShoko raMwari, Chingwa cheHupenyu. Hupenyu husingaonekwe hunogara mumbeu yegorosi kana yebari.
Tinodya mbeu inoonekwa senzira imwechete yatinayo kuti tiwane simba risingaonekwe rehupenyu riri mumbeu iyoyo.
Zvino kuhupenyu hwemweya, Magwaro ndiwo ega chikamu chaMwari chatinogona kudzidza kuti tione nekunzwisisa nzira yaMwari yakavanzika yaanoshanda nesu. Makereke anodzidzisa tsika dzawo dzisina maturo uye mitemo yawo isingarevi chiro. Asi nekudzidza Bhaibheri nekutanga kuzvifungira pachedu tinogona kuwana hutungamiri hwaMwari hwotibvisa pakutadza kwevanhu.
Kuzara kwaMwari kunogara munaKristu. Saka muviri wake wenyama ndiwo waive chikamu chamwari chega chaigona kuonekwa nevanhu. Saka muviri wake waionekwa waive mucherechedzo weMagwaro atinoona.
Ndangariro dzedu dzemukati dzinoda kunatswa kubva pakusatenda neRopa raJesu iro rega rinosuka zvivi. Kusatenda kutenda mune zvimwe zvinhu zvisimo muMagwaro kana kusatenda zvimwe zvinhu zvakanyorwa muMagwaro. Ropa ndiro kunwa kweMweya kunotiita kuti tichene mukati medu kwotimisa kuva vanomhura Mwari kunoitika nekuti zviri nyore kuratidzika tiri vanonamata kana vechitendero kunze asi takazadzwa nekusatenda mukati.
JOHANE 6:55 Nokuti nyama yangu izvokudya chaizvo, neropa rangu zvokumwa chaizvo.
Hakuna mupi wehupenyu ari nani kudarika Shoko raMwari rinotungamirira nhanho dzedu uye Ropa raMwari rinosuka zvivi zvedu nekusatenda kunotimisa kubva pakutenda Shoko raknyorwa.
JOHANE 6:56 Unodya nyama yangu, nounomwa ropa rangu, unogara mandiri, neni maari.
Mukatenda kuBhaibheri munogara mukuda kwaMwari. Hupenyu huri muRopa. Nekunamata tinokumbira Ropa rake kuti ritisuke Mweya Mutsvene, Hupenyu hunenge huri muRopa rake unobva wauya matiri kuzotitonga nekutitungamirira muzvokwadi yese.
JOHANE 6:57 Baba vapenyu, sezvavakandituma, neni ndichararama naBaba; saizvozvo unondidya, uchararama neni.
Mweya waMwari waive muna Jesu, uchimutonga. Hupenyu hwaMwari hwemukati uhu hwaireva kuti Muviri wake wenyama waigona kuzadzisa kuda kwaMwari chete. Jesu aive asina kuda kwake kwemunhu kana kuzvida pachake.
Kana tikadya chingwa nenyama, miviri yedu inozvigaya zvoita chikamu chemiviri yedu.
Saka chikafu chatinodya chinova muviri watinorarama mauri.
Nekudya (kuverenga nekutenda) Shoko tinogaya tonzvera (kunzwisisa) Magwaro uye Magwaro iwayo anova munhu wemukati medu. Zvino hupenyu hwaKristu matiri hunotiita kuti tizadzise kuda kwaMwari nekuti tinenge tichida kuita zvinhu nenzira yake tinenge tisisina rudo rwezvido zvedu zvenyama.
JOHANE 6:58 Ichi chingwa chakaburuka kudenga; hazvina kuita samadzibaba akadya mana akafa; unodya chingwa ichi uchararama nokusingaperi.
MaJuda akaramba achifunga nenzira yenyama. Chingwa chakaburuka kubva kudenga murwendo rweEksodo vakachidaidza kuti mana. Asi maJuda akadya mana vese vakafa.
Kune zvinhu zviviri pamusoro peEvangeri. Kune zvinhu zvenguva pfupi zvenyama zvatinogona kukumbira kuna Mwari zvaanotipa achitigovera nekutichengetedza muhutano. Izvi ndizvo zvinonyanya kutariswa nevanhu vazhinji. Kana vari vatano vanezvekudya, mabasa, dzimba, nezvinhu zvenyika ino vanobatira Mwari nemufaro vachida hupenyu hwekudekara nehutano hwakanaka.
MaJuda muEksodo vaive nechekudya chaibva kudenga, mvura yaibva padombo, mbatya dzavo dzaisabvaruka. Zvakare, vaizonotora misha, maguta, nemapurazi kubva kuvaHedeni vaizodzingwa muNyika yechipikirwa. Nezvinhu zvese zvavaizowana izvi, nemana yemahara kubva kuDenga yavaiwana pavaiida, maJuda vakafa. Vakapesana nechinhu chaive chakakosha kudarika zvinhu zvese zvavaiwana izvi.
Mwari aidawo kuti vamubatire nekuda kwavo. Asi chavaida chete zvaive zvinhu zvenyika ino.
Zvino Jesu aive nechimwe chinhu chaive nani kwazvo kudarika zvinhu zvenyika ino. Aivapa Mweya wake Mutsvene waizopinda nekutonga mupfungwa dzavo wovagonesa kutenda Shoko raMwari muzvikamu zvakadzama zvemweya. Ichi ndicho chaive chakavanzika chehupenyu husingagumi. Hwaizotevera tsimba dzeShoko raMwari Chingwa chedu.Chingwa chatinodya kana chatinotenda chinozoita chikamu chedu choita nzira yatinoda kurarama nayo nekufunga nayo. Tinobva tafara kufunga nenzira yaMwari, kwete nenzira dzedu.
JOHANE 6:59 Wakareva zvinhu izvi musinagoge, achidzidzisa paKapernaume.
Kapenaume zvinoreva kuti nzvimbo yekutendeuka kana kuti guta rekudekara.
Guta iri raizoenda nenzira mbiri. Raigona kuva nzvimbo yekutendeuka apo vanhu vaizoenda kunaMwari vomutevera nekuda kwezvishamiso zvikuru zvakaitika imomo. Kana kuti raizova guta rekuti vanhu vaidekara mariri nedzidziso dzavo dzezvitendero dzakaitwa nevanhu vachisarudza kutevera vanhu venyama vanotungamirira. Iyi yaive mbeu yemasangano akarongwa nevanhu nezvitendero zvavo.
Kapenaume mairi yaive nembeu yekereke yeRoman Catholic yaizouya. Yakasimudzirwa iri Vatican, nzvimbo inotongwa kereke, yakakurisa, yakapfumisa, uye ine simba kwazvo panyika. Asi iri musha wekutadza pamweya uye zvitendero zvechipegani uchaburukira kugehena munguva yeKutambudzika sezvo ichabhombwa nemabhomba eatomi yotsva kuita matongo.
Zvisinei nezvishamiso zvese zvakaitwa mariri nemabasa akaitwa kubatsira varombo nevanoshaya, chaidiwa nevanyori kuna Jesu yaive mari yake. Uku kwaive kusanoratidzirwa kwerudo rwemari runanaPope rusingaperi, serwaive naJudasi.
MATEO 17:24 Vakati vachisvika Kapernaume, vanhu vaigamuchira muripo wetembere vakavuya kuna Petro, vakati: Mudzidzisi wenyu haaripi muripo wetembere here?
Sangano rekereke rinozarura masuwo kuzvinzvimbo zvakawanda zvakakosha mariri. Pasina nguva refu zvigaro zvinenge zvavamo: mabhishopu, maarchibhishopu, makadhinari, mapope. Munhu mumwe nemumwe achiedza kwazvo kuva akakosha paanofamba achinowana chinzvimbo kumusoro. Munhu akakoshesesa ndiye anozowanikwa ari pamusoro pavose.
MARKO 9:33 Vakasvika Kapernaume; zvino wakati ava mumba, akavabvunza, achiti: Makanga muchiita nyaya yeiko munzira?
34 Vakaramba vanyerere, nokuti vakanga vaita nharo pakati pavo munzira, kuti mukuru ndiani.
Pavakanga voda kusvika Kapenaume, vadzidzi vakakakavadzana kuti aive mukuru pakati pavo aive ani.
MATEO 8:5 Jesu wakati apinda Kapenaume, mumwe mukuru wezana akavuya kwaari. Akakumbira zvikuru kwaari,
MATEO 8:14 Jesu, wakati achipinda mumba maPetro, akavona mai vomukadzi wake vavete vachinzwa fivhiri.
Imba yaPetro yaive kuKapenaume. Izvi zvairatidzira kuzosarudza kwaizoitwa neRoman Catholic kuti Petro ndiye aive mudzidzi akakoshesesa. Vaizotaura kuti iye ega ndiye aive nemakiyi eDenga saka iye ega ndiye aigona kuvhura mukova wedenga. Izvi zvakapa Pope, sandiye akanzi akatsiva Petro, simba guru kwazvo pakati pemarudzi evatorwa munguva dzerima. Vaifanira kuterera Pope kana vaida kuti Petro avazarurire mukova weDenga, kana vafa.
(Asi vakakanganisa chinhu chimwechete, Petro aive akaroora asi maPope haatenderwi kuroora).
Saka nzira yedenga yakadzikisirwa pakuita nzira yemabasa. Chero vaiterera pope, vachimupa mari neminda yavo, vachirwisa nekuparadza vavengi vaPope, vachienda kukereke yeRoman Catholic kunonamata ikoko nguva dzese vaizopinda denga chero zvidii.
Saka kereke yeRoman Catholic yakakohwa pfuma yemarudzi evatorwa ikararama zvakadekara payaisimuka kuva nesimba kwazvo pamusoro pematongo ehushe hweRoma.
Saka Jesu akaratidza chokwadi chekuti maJuda vakakunda kubuda munyika yeEgipita muEksodo vakafa murenje nekuti vaingoda makomborero aMwari ezvinhu zvenyika ino, vateveri vake vazhinji vechiJuda vakabva vamusiya. Ivo vaivewo nerudo muEvangeri rekukomborerwa nezvinhu zvenyika ino.
JOHANE 6:60 Zvino vazhinji vavadzidzi vake vakati vachizvinzwa, vakati: Iri shoko igukutu; ndianiko ungarinzwa?
Kana zvasvika pambiri, chokwadi hachigoni kukwikwidza nechakaipa.
Chokwadi chakaoma. Chakaoma kwazvo kuvanhu vakawanda kuti vachitambire. Vatungamiri vezvitendero vanogadzira zvitendero zvakaipa zvakawanda zvisingabvi paMagwaro zvakazara. Vakawanda vanowana kudekara muzvitendero zvakaipiswa izvi.
JOHANE 6:61 Asi Jesu, zvaakanga achiziva mumoyo make kuti vadzidzi vake vanon’un’una neshoko irero, akati kwavari: Iri shoko rinokugumbusai kanhi?
Chero vadzidzi vaive vagumbuswa nenzira dzaMwari dzaive nechokwadi chakazara. Vaidawo kukomborerwa nezvinhu zvenyika ino uye hutano. Tese tinosarudza evangeri rakareruka.
JOHANE 6:62 Muchagodiniko kana muchivona Mwanakomana womunhu achikwira kwaaiva pakutanga?
Asi Jesu aive akaisa meso ake pakuda kwaMwari kwedenga. Aive asiri panyika kuti abudirire ave nepfuma zhinji. Nekuti akabva kudenga akaramba zvese zvaaipihwa nevanhu zvehushe hwepasi pano nekuti aiziva kuti hazvigari. Aida chete kuita kuda kwaMwari, zvaireva kuti kurasikirwa nehupenyu hwake, kuti agodzokera kudenga kunogadzirira hushe hwechokwadi.
Paakati “kukwira kudenga” airatidza kuti zvinhu zvepasi pano hazvina maturo zvakadii. Kuda kwaMwari chete kwedenga ndiko kwakakosha pano panyika.
JOHANE 6:63 Mweya ndiye unoraramisa, nyama hainamaturo; mashoko andakataura kwamuri, ndiwo mweya novupenyu.
Mweya Mutsvene chete ndiwo unotipa hupenyu husingagumi. Mabasa ese atinoita panyama kutambisa nguva. Shoko raMwari ndiro rakakosha chete. Tinofanira kutenda mariri toritevera uye torirarama. Mweya waMwari unoshanda nenzira yeMagwaro chete, kwete nenzira yendangariro dzevanhu.
JOHANE 6:64 Asi vamwe venyu variko vasingatendi, nokuti Jesu wakanga achiziva kubva pakutanga, kuti vaisatenda ndivanani, vuye kuti ndiani waizomupandukira,
Muboka rimwe nerimwe munowanikwa vasingatendi. MaKristu mazhinji vanotenda mutsananguro yeBig Bang neyeivhorusheni zvinhu zvesainzi zvinorwisa Magwaro. Nerudo rwavo rwekutambirwa nevesainzi, maKristu vanoramba kutenda kwavo kwechokwadi kwekuti Magwaro ese akafemerwa naMwari.
Vakadzidza vanodzidzisa vana vedu kuti vanobva kumhuka asi vanonyunyuta kuti vana vedu vanoita hunhu hwakaita sehwemhuka.
JOHANE 6:65 Akati: Nemhaka iyi ndakati kwamuri, kuti hakuno munhu ungavuya kwandiri, kana asina kuzvipiwa naBaba.
Hatigoni kutevera Bhaibheri neruzivo rwedu isu pachedu. Tinofanira kuzvarwa patsva kuti tigone kuona zvinhu nenzira yaMwari. Saka tinofanira kutendeuka tokoka Mwari kuti apindire mupfungwa dzedu uye hupenyu hwedu. Mwari ega ndiye anogona kutipa maonero atinoda kuti tinzwisise Bhaibheri nezvarinoreva.
JOHANE 6:66 Kubva panguva iyo vadzidzi vake vazhinji vakadzokera shure, vakasazofamba naye,
Uyu muono mukuru unoburitswa pachena neMagwaro pamusoro pe 666, chiratidzo chechikara. Antikristu zvinoreva kuti anti Shoko. Vanhu ava vanoramba kutevera Jesu. Kana tikabva pakutenda kuMagwaro, tinobva tatora chiratidzo chechikara.
Paakaramba kuva mambo wavo wenyika ino, vakapera rudo naye vakamusiya sezvo vasina kuzviwanira makomborero ezvinhu zvenyika ino. Dai akaita mambo wavo wepasi rino, vangadai vakazviwanira zvinhu zvenyika ino.
Jesu haana kubvira ataura pamusoro pechiratidzo chechikara paaive kune rumwe rutivi rweGungwa reGarirea. Zvino zvaaive ava rutivi rumwechete neTiberio, yakatumidzwa nezita remubati weRoma, akataura nezvazvo achireva kubata kwehutungamiri hwekereke yeRoman Catholic nekurongwa kwayo. Vaizoita kuti maCatholic nevanoipikisa vese kuti vabve paMagwaro.
Tiriniti, Kisimusi, masangano, achibhishopu, rubapatidzo rwemvurwa mumazita ezvinzvimbo zvitatu, munhu ari musoro wekereke. Izvi ndizvo zvimwe zvezvitendero zveCatholic zvisimo muMagwaro zvakatevedzerwa nevakabuda mairi vachiti havafadzwi nedzidziso dzayo.
Saka nekereke yeRoman Catholic, Satani akagadzirira kuvaka kereke yepasi rese, inotongwa nemunhu, yakapfuma inopa vanhu zvinhu, rukudzo, mabasa ane muripo wepamusoro-soro nemhemberero dzinodakadza.
JOHANE 6:67 Jesu akati kuna vanegumi navaviri: Nemi muchaendawo here?
Jesu aisafadzwa nekuwanda kwevanhu. Chokwadi chaive chisina kuvanzwa chaive chadzinga vakawanda vevateveri vake. Aive achiri akazvipira kurasikirwa nevanegumi nevaviri vaive vasara kana vaive vasina kuzvipira kumutevera. Jesu aida vadzidzi vaive vachiterera Kuda kwaMwari zvakazara, vaive vasingateveri mifungo yavo.
JOHANE 6:68 Simoni Petro akamupindura, akati: Ishe, tichagoenda kunaniko? Ndimi muna mashoko ovupenyu bwusingaperi
Petro akaona kuti nzira yaive yakaoma. Chokwadi hachisi nyore kunzwisisa. Mwari akapa Petro zaruriro yakadzama neimwe nzira zvekuti Petro akaziva kuti Jesu aive nechokwadi, kunyange chaive chakaoma kunzwisisa asi chaive chokwadi.
Chokwadi chakafanana nechando chiri mumvura. Zvikamu zvipfumbamwe kubva mugumi hazvioneke kumunhu anenge anotarisa zvekumhanya nekuti zviri pasi pemvura. Zvinoda kutsvaga uye kushanda nesimba kuti tinzwisise nzira dzechokwadi dzakadzama. Hakuna nzira iri nyore kunzwisisa. Chokwadi chicharamba chisina mbiri muruzhinji. Saka Petro aive akurudzirwa agadzirira kupokana neruzhinji rwaive rwabva kuna Jesu. Aive nekutenda kwekuramba ari kuna Jesu asi zvaidawo kushinga kuti apokane nekuda kweruzhinji kunova kusunga kwekuita kweboka.
Asi kana mukatevera boka munozoona kuti uswa hwakanaka hwese hwadyiwa.
Petro aive azvipira kutevera Jesu, chero zvaireva kuti aizova chikamu cheboka duku.
JOHANE 6:69 Isu takatenda vuye tine chokwadi kuti ndimwi uya Kristu Mwanakomana waMwari mupenyu.
Petro aive mutauriri weboka duku revanhu gumi nevaviri. Akaratidza kuvimba muboka “rekereke” yake raive duku. Ivo pamusoro pazvose, vaitenda kuchokwadi.
JOHANE 6:70 Jesu akapindura akati: handina kukusanangurai, imi vanegumi navaviri here? asi mumwe wenyu ndowa Diaborosi.
Jesu akapindura kuti aive asarudza boka iri. Uye huvepo hwavo hwaive nechinangwa chakadzama. Kuzadzisa zano raMwari paifanira kuva newakaipa pakati pavo.
Saka kuvimba kwedu hakufaniri kuva kuri mukereke, asi muruwadzano rwedu naShe Jesu.
Vadzidzi vaifunga kuti vose vaive vakanaka pamberi paMwari. Asi Judasi ari pakati pavo, vaive vasina.
Kune boka rekereke risina akaipa pakati paro here? Isu vanhu hatizivi.
BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE. NGUVA YEKEREKE YESIMYRNA
Rufu rwaive rwusiri rwega mbeu yemuzambiringa wenhema asi mumuzambiringa wechokwadi maive nehurema hwaipindira huchiipisa nekuti vaive vatotanga kubva pachokwadi chaive chisina kusvibiswa chemakore mashoma mumashure mePentekosita; uye hakuna vatendi vechokwadi vakasimba uye vane hutano pamweya kudarika ruzivo rwake rwechokwadi chakanaka cheShoko raMwari, sezvakaonekwa neruzhinji rwemiyenzaniso iri muTestamente Yekare. Chitendero chakarongwa nevanhu chaikura, chichitsigira nekutenderana nerufu rwenhengo, nekuti hutungamiri hweMweya Mutsvene hwaive hwabviswa Shoko raive ratsiviwa nezvieraera, tsika nezvipiriso zvakaitwa nevanhu.
JOHANE 6:71 Wakareva Judasi, Isikarioti, mwanakomana waSimoni, nokuti iye ndiye waizomupandukira, ari mumwe wavanegumi navaviri.
Zita rekuti Simoni rinoreva kuti “terera”. Zvisinei Judasi aida mari kwazvo akaterera maprista makuru vakarangana naye kuti atengese Jesu.
Dai Judasi akatambira kure nekutenda kwake kwekuti “pfuma kwazvo” akaterera Jesu, Shoko, angadai aive akanaka. Asi kana chitendero chikakurudzirwa nerudo rwekuita mari, musanganiswa iwoyo wakaipa sechefu.
Vamwe vadzidzi veBhaibheri vanoti Iskarioti zvinogona kureva kuti “Munhu wemaguta”. Tarirai huzhinji hwakashandiswa paizwi rekuti maguta.
Guta rekutanga rakataurwa muBhaibheri rakavakwa naKaini (Genesisi 4:7), munhu wekuipa akauraya mukoma wake Abero. Varume kana vakadzi vanotonga vanoda guta rekutonga vari mariri, sezvo simba pamusoro pevanhu riri nyore kushandiswa kana vanhu vakaitwa mapoka. Vanhu vanoda kutonga pasi rino, kutanga nehushe hwekutanga hwaNimrodi, vakagadzira kutonga vakavaka maguta akawanda. Asi hushe hwavo hauna kugara. Rudo rwekumanikidzira haruiti nheyo dzinogara dzerunyararo uye rugare. Hushe hweguta reRoma hwakagara kwenguva yakarebesa sezvo hwaive hwakavakwa nesimba reminondo yedare yaiparadza vapikisi vose. Asi vatongi, vari pasimba, vaibva vareva mari yemitero yakawandisa. Pakupedzisira, hushe hwakabva hwakurisa zvekutadza kuhutonga. Mauto airamba achida minda kuti vazoita mudyandigere vari pairi. Saka hushe hwairamba huchikura. Asi kurwira minda iyi yese kwaida vanhu vazhinji vaizoita mauto uye mari zhinji. Saka hushe uhu hwakabva hwaparara.
Saka Satani akatangidza kufunga zano rekuti angatonge sei pasi rese. Kutonga nyika kunonyatsogoneka kana zvichisanganisira simba munezvemakereke. Vanhu vanoripira mari mumakereke kuti vawane nzvimbo kudenga, zvisina zvazvinotora kukereke. Saka kereke inoita pfuma zhinji zviri nyore. Denga rinosvikwa chete nekutevera mutungamiri wekereke. Saka mutungamiri anenge ane simba rakazara pamusoro pevanhu mukereke make. Kana vanhu vangova mukereke vanobva vatya kubuda mukereke iyoyo, vanotya kwazvo kusiya kereke nekuti mutungamiri akaita dzidziso yezvechitendero inofanira kutendwa nevanhu yezvakavanzika zvinenge zviri nzira yekukwira kudenga. Uye mutungamiri ega ndiye anokwanisa kusimudzira nekuzarura mukova kuzvakavanzika zvakadzama zvaanogona kusika iye ega.
Saka Satani akabva ashandura pfungwa dzake. Pachinzvimbo “chemaguta” zvaireva maguta mazhinji aitapwa nehushe hunenge huchikura, akasarudza kuita nzira yekuva “nekereke yeguta” mukati meguta.
Masvingo akavakwa akapoteredza Roma kusanganisira guta reVatican.
Guta reVatican. “ican” kana mavara ekwekupedzisira kwezita rekuti Vatican akaverengwa akapesaniswa anoburitsa zita rekuti Cain “Kaini”.
“Ndinogona” (“I can”) ndiko kutsanangurwa kuri pachena kwekuda kwemunhu muvengi mukuru wekuda kwaMwari. “Maguta” akava guta mukati meguta. Guta reVatican iguta duku kwazvo (guta dukusa pasi rese” riri mukati meguta reRoma rakatanga riri guta pamusoro pemakomo manomwe.
Asi rakakura kuva simba repasi rese rine vanhu veRoman Catholic vanodarika 1,2 biriyoni vanoripa simba guru munezvematongerwo enyika, zvechitendero uye kurudziro huri munezvemari. Ndiyo kereke hurusa pasi rese zvisina imwe inokwikwidza. Inewo mutsetse wakarebesa wevatongi (mabhishopu eRoma vakazova maPope makore akapoteredza 400 AD) vakatonga kereke yeCatholic kudzokera mumakore ekutanga chaiwo enhorondo yekereke. Kaduku kane simba guru, Vatican ndiko “kanyanga kaduku” kakataurwa pachiprofita chaDanieri.
Vatican ndiyo Judasi wanhasi. Dzidziso dzakaitwa nevanhu dzakatengesa Shoko raMwari (Jesu) apo kutenda muBhaibheri kwatsiviwa nekutenda mumasangano emakereke netsika dzavo dzisina kubva muBhaibheri.
Sezvo makereke akabuda muCatholic nekuti vaipokana nedzidziso dzayo vakatorawo nzira dzekuti masangano anoita munhu ane simba pamusoro pevamwe dzakatangwa neRoma, zvakabva zvatadza kudziviswa kuti sezvo mubatanidzwa wemakereke paunokura kana paunoitwa nechisimba Pope anenge ari ndiye mutungamiri wemakereke anenge abatanidzwa aya.
Aya ndiwo magumo evaya vasina kutenda kwakazara muBhaibheri rakanyorwa Shoko raMwari. Jesu, Shoko, ndiye ega musoro wekereke.